Kedụ ka ụgbọ njem ọha na-anọ na Ankara maka ụbọchị anọ? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedụ ka ụgbọ njem ọha na-anọ na Ankara maka ụbọchị anọ?
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Kedụ ka ụgbọ njem ga - anọ na Ankara n'ehihie
N'ikwekọ na usoro a ga-eme megide ọrịa coronavirus (Covid-19), a ga-etinye iwu ịlọta na 23-26 May 2020, dịka mkpebi nke ANKARA GOVERNOR'S UMUMI HIFZISSIHHA BOARD, nke akara akara ụbọchị 21.05.2020 ma gụọ 2020/37, na ụgbọ ala nke EGO General Directorate. N'agbata awa nke 23-2020 na Satọde, 07.00 Mee 20.00, nke bụ abalị nke izu; N’ụbọchị mbụ, nke abụọ na nke atọ nke Eid al-Fitr, 24-25-26 Mee Mee 2020, ndị ọrụ ahụike anyị na ụmụ amaala ndị ọzọ bụ ndị a gụpụrụ n’usoro ịpụ n’etiti 07.00-09.00 na 16.30-20.00.
Na mgbakwunye, gbanwe oge ọpụpụ na ụzọ ụgbọ ala EGO, nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ 440 ahịrị na omume, ka emelitere n'etiti ogo KARAR. Mmelite dị na ngwa ekwentị EGO CEP yana weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ anyị (www.ego.gov.t bụ) na "AKWANKWỌ N'IME Obodo / Sistem Weebụ Ozi".
Agbanyeghị, n'ihi "Ememme Ramadan" n'etiti 24-25-26 Mee 2020, a ga-emejupụta usoro iwu, malite na 06.00 ruo 24.00 n’ụbọchị ezumike okpukpe na nke mba ruo mgbe ntuli aka nke "Ndị Ọchịchị Obodo Na-ahụ Maka Ọchịchị" nke mbụ nke ndị Ankara Metropolitan. Transportationgbọ njem ọha nke EGO General Directorate nyere na ụgbọ ala, usoro ụgbọ oloko na ụgbọala USB… ”Dị ka mkpebi ahụ si dị, ụmụ amaala anyị bụ ndị agaghị aga na ụbọchị ae hotara na mbụ nwere ike irite uru na bọs EGO nke ga-arụ ọrụ n'etiti 07.00-09.00 na 16.30-20.00 n'oge Ememe Ramadan.
ANKARAY na Metro ga-emechi n’etiti ụbọchị a ga-etinye oge ọ ga-alọta.
Oge ikpeazụ ọpụpụ ụgbọ oloko maka M22, M2020, M1 na M2 na Fraịde, Mee 3, 4 ka enyere n'okpuru.
Emegoro njem ikpeazụ na ANKARAY ịhapụ Dikimevi na AŞTİ na 22.20. Usesgbọ ala ha ga-arụcha ọrụ mgbanaka ikpeazụ ha mgbe metro ahụ bukwara ndị njem ikpeazụ.
Kedụ ka ụgbọ njem ọha na-anọ na Istanbul maka ụbọchị anọ? Metrobus na Steamboats…
Ihe agha Germany ga-eme ka njem gaa n'ihu ruo ụbọchị atọ
Uzo esi aga na họtelu Ndi Njikota Izu Izu na Izmir
Ịdọ aka ná ntị Spraying site na TCDD: Adịla na Rails N'oge 10 Day
E debere okporo Ugboro-ala nke Obodo N’oge anọ na Mersin!
TCDD dọrọ aka ná ntị maka ofzọ nke Mgbapu! Abịarula ụbọchị 10
Oge ihe omume Ankara metro
Ụgbọ njem ọha n'oge Bayram na Izmir Free
Ụgbọ njem ndị mmadụ na İzmir Discounted 50 Pasent N'oge Ememe